Apple Pay waxay ka dagi doontaa Faransiiska xagaaga iyo toddobaadkan Shiinaha | Waxaan ka socdaa mac
Mar labaad ayaa Apple Pay Waxay ku jirtaa bushimaha qof walba waana inaan ku jirnaa taariikhihii uu Apple ku sheegay inuu ka soo degayo Shiinaha taasna waa in sanadka cusub ee Shiinaha uu durbaba bilaabmay. Waxay u muuqataa taas isla bishaan Febraayo 18 waxay noqon doontaa maalintii ay Apple dooratay inay safarkooda ka bilaabaan dalka cusub iyadoo adeegsanaya habka lacag bixinta moobaylka.
Asu marka waxaan kuu sheegi karnaa in, ka dib markii Tim Cook uu ku dhawaaqay waqti ka hor in 2016 ay tahay sanadka ay Apple Pay ka dagi doonto Spain oo ay la jirto hal waddan oo kale oo Yurub ah, waxay umuuqataa in kan xiga ee xagaagan kusoo biirayaa uu noqon doono France.
Maalmo kooban ayaa hadhay, haddii xantaasi run tahay, Apple Pay inay Shiinaha ka gaarto shirkadda weyn ee UnionPay, oo ah cidda maamusha inta badan kaararka deynta iyo kaararka deynta. Waxaan dhamaanteen ka markhaati kacnay bilihii la soo dhaafay dadaalka ay sameysay shirkadda tufaaxada la qaniinay in aad la gali karto Apple Pay ee Shiinaha waxayna umuuqataa in asbuucaan uu rumoobi karo. Waxaan arki doonaa sida qaabkan lacag bixinta uu ugu shaqeeyo dhaqanka Shiinaha.
Dhinaca kale, warbaahinta Faransiiska waxay xaqiijineysaa in Apple Pay ay sidoo kale ka dagi doonto Faransiiska qeybtii labaad ee 2016 sidaa darteed waxay noqon kartaa WWDC 2016 taas oo kuwa ka socda Cupertino ay ku dhawaaqi karaan. Ilaa Spain waxay ku jiri kartaa Muhiimmadii loo malaynayay ee ahayd Maarso 15 halkaasoo looga dhawaaqay.
Si kastaba ha noqotee, Apple Pay waxay fureysaa farqiga dalal aad iyo aad u tiro badan sidaa darteed waxaa la filayaa inay ugu dambeyntii noqon doonto waxa Apple rabto, taas oo ah, lama huraan iyo caalami.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Pay » Apple Pay waxay ka dagi doontaa Faransiiska xagaaga iyo toddobaadkan Shiinaha
Real Racing 3 wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple TV